Mogadishu Journal » 2018 » February » 13
Mjournal :-Wararka inaga soo gaaraya Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maqribnimadii caawa caruur ku cayaareysay Walxaha Qarxa ay la qaraxday, sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah. Caruurtan oo laba aheyd ayaa Walxaha qarxa ku heystay Isgoyska...
Mjournal :-Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya Kuwa Midowga Afrika ee AMISOM oo maanta ka ruqaansaday degmadda Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaaray degmadda Sablaale oo ay ku sugnaayeen Shabaab. Saraakiisha Ciidanka xoogga ayaa sheegay in Ciidamada...
Mjournal :-Tababaraha kooxda Watford Marco Silva ayaa laga fakirayaa in lagu aamino shaqada kooxda ka dhisan Galbeedka London ee Chelsea. Tababaraha Blues Antonio Conte ayaa ka quustay loolanka horyaalka kadib markii uu silama filaan ah ku qaaday xilli ciyaareedkiisii ugu...
The world’s top oil importer, China, is expected to launch its long-awaited and delayed yuan-denominated oil futures contract at the end of March, according to Reuters’ sources. The petrol yuan is seen as Beijing’s challenge to the US dollar, the dominant global currency in oil...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya degaanada Awdheegle iyo Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi Shabaab ku xir xireen tiro dad ah oo shalay deganadaasi ku soo dhaweeyay ciidamada dowladda Soomaaliya. Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka dadka...
Mjournal :-Rag hubaysan oo ka tirsan Al Shabaab ayaa maanta barqadii Degmada Wadajir waxa ay ku dileen nin magaciisa lagu sheegay Maxamed Tima Jilic oo la sheegay inuu ahaa tababare ciidanka dowladda. Al Shabaab ayaa sheegtay in Maxamed Tima Jilic ay ku dileen Degmada Wadajir,...
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta dhagax-dhigay xarunta degmada Yaaqshiid oo dib-u-dayactir lagu sameynayo. Duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Benaadir ay ka go’an tahay...
Mjournal :-Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaqiijiyay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka baxeen degaano ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose oo ay shalay Al-Shabaab kala wareegeen. Gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulka iyo Maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose...
Mjournal :-Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, dowladaha Itoobia, Talyaaniga, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa ayaa soo dhoweeyay go’aannadii Golaha Amniga Qaranka ee Soomaaliya (NSC) uu ku qaatay kulankii 6-10 Febraayo...
Chelsea ayaa guul qurux badan ka gaartay West Brom kulan xiiso leh oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge, taasoo ka dhigan iney wadada guulaha dib ugu soo laabteen sidoo kalana ay saacideen macalinkooda Antonio Conte. Blues waxey soo tiigsatay booska 4-aad iyagoo kala baxay...